Rag wajiga duubtay oo sarkaal sare & odayaal ku dhaawacay Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rag wajiga duubtay oo sarkaal sare & odayaal ku dhaawacay Kismaayo
A warsame 23 December 2014 23 December 2014
Mareeg.com: Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi lagu dhaawacay sedex qof oo uu ku jiray Col. Yaasiin Nuur Gaas oo horey uga tirsanaa maamulka magaalada Kismaayo.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegau in rag hubaysan oo ka dagay gaari ayaa weeraray hoteelka uu daganaa sarkaalkan iyadoo la maqlay tacshiirad ka dhacday gudaha hoteelka.
Weerarka ayaa waxaa sidoo kale lagu dhaawacay labo ka mid ah odayaashii ka qeybgalay shirkii lagu dhsiay maamulka Juba, kuwaasoo wax ka deganaa hotelka la wweeraray.
Dhawaaca Col Yaasiin Nuur Gaas ayaa loo qaaday Cisbitaalka Amisom ee magaalada Kismaayo. Ma jirto cid sheegatay weerarkaasi.
Col Yaasiiin ayaa bishii June ee sanadkii hore sidaas oo kale ku dhaawacmay tacshiirad ka dhacday magaalada Kismaayo markaas oo uu ahaa gudoomiye kuxigeenka maamulkii Kismaayo isagoo markii dambe ka bogsaday dhaawacaasi.
Afhayeen u hadlay kooxda Barre Hiiraale ayaa ku eedeeyay weerarkaasi in ay ka dambeeyeen Ciidamada Maamulka Jubba oo si gaar ah u beegsaday saraakiishan oo qaarkood kamid ahaayeen kuwii taabacsanaa Barre Hiiraale oo Kismaayo lagu soo celiyay.
Dhinaca kale Sargaal u hadlay Maamulka Jubba ayaa weerarka lagu qaaday saraakiisha ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen Al-Shabaab, waxa uuna intaa raaciyay in ay wadaan baaritaano ku aadan weerarka ka dhacay Kismaayo.
Waqtiga Cumar Cabdirashiid codka kalsoonida loo weydiinayo baarlamanka Soomaaliya oo la shaaciyey